Ngiyakuthanda ukuhlola izinhlobo ezintsha zomsebenzi? Funda indlela yokwenza izigqoko ngezandla aphume edayisa izinto. Ezinye ongakhetha bheka umxhwele, kodwa kulula kakhulu ukusebenzisa. Lamakhono ingasetshenziswa ukwenza zokubhukuda fancy, izigqoko for yendwangu onodoli noma izinto zemfashini nje nezipho yasekuqaleni.
Izigqoko ngezandla aphume edayisa izinto
Uma endaweni wena onobuqambi o-creative futhi othanda ukukwenza ngenalithi, kufanele uthanda lolu hlobo lomsebenzi, ikakhulukazi njengoba amathuba kule ndawo eziningi. Womshini headgear kungaba:
ngokuhlanganisa amasu amaningana kanyekanye.
Ngakho, okukhethwa, indlela yokwenza izigqoko ngezandla aphume edayisa izinto, kakhulu. Kukhethwa incike isikhathi etholakalayo, umgomo yokukhiqiza kanye, yebo, ukuthi awusenalo.
Ufuna baye baphendukela isigqoko enhle eyenziwe ephepheni, amakhadibhodi, indwangu? Khona-ke yiba nesineke futhi uvule umcabango, plus konke uzodinga okulandelayo:
izakhi okuhlobisa (ubuhlalu, kuze kudabuke umhlane, neminsalo, lace, izimbali);
okokusebenza isizinda (iphepha, amakhadibhodi, iphephandaba tube).
Izinketho elula kulula ukwenza nje isigamu sehora.
Ukulungiselela i-Isigaxa isigqoko
Kungakhathaliseki headgear okhetha ukukwenza, ngeke kusadingeka ukwenza. Njengoba ojwayelekile, uhlaka wenza indima isigqoko leyakhiwe ngemabhokisi noma iphepha. Khiqiza-accessory ukuma esingunxantathu ngezindlela ezimbili:
Goqa ishidi unxande.
Esimweni sokuqala, lapho ishidi ikhishwa kusukela esikhwameni, liyonqanyulwa kakhulu ohlangothini engezansi. Inketho sesibili kuhilela ukubulawa kokuqala workpiece umumo ethize, okungukuthi a umkhumbi. ngaleyo ndlela Ngezansi etholwe bushelelezi futhi ayidingi ilungiswe.
I umphetho ngokuvamile kuqala banamathele a stapler ukuze bakwazi ukulungisa ubukhulu, uma wenza iphutha okokuqala. Ubakaki is zisishulwe, futhi base iqinile kwenye indawo. Uma ifomu weneliseka, ungakwazi ukunamathisela umphetho. Ngaphezu kwalokho, ngokuvamile izama ukwenza ongabonakali, noma Tuck ibe kahle ukuhlobisa.
Kanjani ukwenza isigqoko workpiece cylinder
Uma udinga ifomu, kuthatha izinkinga ubuchwepheshe ambalwa (uma kuqhathaniswa ne sangaphambilini), futhi ukusebenzisa inombolo enkulu yezenzo. Ihnlamvu leyakhiwe ngemabhokisi noma iphepha, uyohlale aqukethe timphawu letintsatfu:
Asongwe ku ishidi tube yobukhulu oyifunayo.
Ngokuphathelene emasimini, bona engenziwa somkhiqizo ngesimo Isigaxa.
Ukwenza Isigqoko cylinder, ukusebenza kanje:
Thatha intambo noma yezinhlamvu balinganise obungazungeza ikhanda endaweni efanele ukuze isigqoko esizayo akuyona kucwila futhi awuzange aminyene.
Sika isikwele ngobude oyifunayo (ozithole intambo), ikhumbula ubukhulu umphetho. Ishidi ububanzi kufanele luhambisane ukuphakama isigqoko. Khipha uMbhalo nalutho unamathelise ezivuzayo.
Usebenzisa ikhampasi, ukudweba indilinga. Selilonke uzovumelana izibalo endimeni 1 no 2. Dweba ngomunye umbuthano ubukhulu inkudlwana. Le libanga kuyadingeka ukwenza gluing izingxenye.
Landela izinyathelo wangaphambilini, kodwa uyibhala enkulu iphepha, ngoba, ngaphandle umbuthano kwangaphakathi, uzodinga uchithe isikhathi esengeziwe futhi ngaphandle. Kuyoba ilinganisele usayizi amasimu.
Thatha izingxenye ezimbili Senziwe ngezigaba ezimbili eyedlule, futhi lezo zingxenye ezizosetshenziselwa ukunamathisela, sebeziqhumbuza emhlabeni azungezwe ngokusebenzisa ibanga elincane. Kwakhe ekwenzeni izinqumo kuye ngobukhulu umkhiqizo wakho. Uma benza isigqoko ngoba unodoli, futhi kuba konke elingekho ngaphezu kuka 10 cm, kanye nezimboni kufanele kwenziwe kungakapheli amamilimitha angu ambalwa. Uma i-accessory ye yakhelwe omdala, ibanga phakathi notch kungenziwa kukhethwe mayelana 1.5-2 cm.
Manje agobe ingxenye onenkotho endaweni efanele, unamathelise ezivuzayo.
Konke sekulungele. It uhlala kuphela ukupenda noma ukuhlobisa ngesisekelo iyiphi enye indlela.
Hat kusuka iphephandaba amashubhu
Sula wonke umuntu ukuthi imfucuza yephepha - Izinto ezingenamsebenzi, kodwa hhayi wonke umuntu uyazi ukuthi umbala, bese linikeza uhlu omnyama nomhlophe kungenziwa ezaqala ukwenziwa izipho umbukwane, ngisho izigqoko. Akuyena wonke umuntu ukuqagela ukuthi - isigqoko ezenziwe iphepha. into enjalo uzonikhumbuza utshani headgear sibonga nokweluka ehlukile. Ngo umbala, ungenza konke, noma pre-ukudaya amashidi, noma ukudala i-umkhiqizo osuphelile kuphethini umbala. Ngakho, umsebenzi simiswe ngalendlela lelandzelako:
Okokuqala kufanele usengenza uzimele ukuma ezifanele kanye nosayizi, nakuba ungasebenzisa isigqoko ngomumo eyenziwe noma enye into, ezifana ibhakede noma pan.
Manje kudingeka ukulungiselela tube. Bona basonta amashidi amaphephandaba noma omagazini ngosizo izinaliti noma skewers round. Zama ukwenza ukuze komunye umkhawulo tube ukuze uthole okuningi kancane. Lokhu kuzovumela ngesikhathi ukwaluka kulula ukwandisa ubude impahla. Emalungeni, kanye ezinkulu izakhi ngabanye ethe njo.
Lapho zonke ilungele ukuqala ukwelukwa abantu imithwalo okunzima ukuyithwala. Ubuchwepheshe ingasetshenziswa zihlukile, kodwa incazelo iyafana. Okokuqala esithathwe amashubhu eziningana, eligoqiwe crosswise, Thatha enye elilodwa noma amabili kuya opletaniya "skeleton". Lokhu kwenziwa ngendlela phansi umbuthano.
Ukusebenzisa base akhethiwe uqhubeke ihlanganisa ingxenye mpo umqhele;
Penda umkhiqizo osuphelile, uma singelashwa amashidi. Ngemuva omiswe, ebusweni kungaba polakirovat. Lokhu kuzokwenza ukunikeza akhanye umbukwane futhi wenze isigqoko amanzi.
Manje kubalulekile ukuhlobisa accessory ye umhlobiso ezengeziwe: izimbali inayiloni, satin kuze kudabuke umhlane, Imikhiqizo kusukela ubuhlalu, noma yimuphi omunye izakhi.
Lokhu hat kungaba samanje njengoba isikhumbuzo, umhlobiso ingaphakathi noma ebhishi izimfanelo.
Indlela thunga isigqoko ngoba suit
Noma yimuphi lezidumbu, ukukhiqizwa kwanoma elichazwa ngenhla kungenzeka embozwe ngendwangu. Uma udinga ifomu ezinye angajwayelekile, isib, ngesimo a amakhowe, izithelo, imifino kanye nezilwane ezincane kufanele uthole iphethini elihambisana noma ukwakha ngokwakho. Empeleni, ungakwazi kalula wenze izigqoko engavamile kakhulu futhi original ngezandla zabo kuzo edayisa izinto. Indlela elula ukusebenzisa uboya noma wazizwa, ngakho ugcine isimo sabo kahle, kroyatsya ngaphandle kwezinkinga, asidingi ezivuzayo ukwelashwa kungase ithungwe zokuhlobisa ngisho ohlangothini front, nemininingwane encane labo abazokwazi kunenze nisondelane kwamanzi. Uma umusha ku-lokuthunga endaweni, khetha iphathini futhi noma iyiphi impahla bese udala isigqoko ngoba zomkhosi imvunulo noma nje Ukunquma-accessory engavamile for the holiday.
Ngakho, uma ubona ukuthi cap yasekuqaleni kungenziwa kalula futhi ngokushesha. Mangaza abangani bakho nge izesekeli engavamile noma isigqoko ngoba zomkhosi timphahla tekubhukusha.
Ingelosi ubuhlalu: ihlanganisa uhlelo. Ukwaluka ubuhlalu: izikimu Wabasaqalayo